Imakethi ehlaziyiweyo ye-iPhones nayo iya kufika e-India | IPhone iindaba
Intengiso ye-iPhones ehlaziyiweyo nayo iya kufika e-India
Azikho iinkampani ezimbalwa ezicinga ukuba Indiya Yeyona ntengiso iphambili ibalulekileyo ekufuneka uyijongile ngoku. Yiyo loo nto iinkampani ezinje ngeApple zibheja kwilizwe laseIndiya, zifikelela kwizivumelwano neevenkile zaseIndiya zokuthengisa izixhobo zazo kwaye nezicwangciso zazo zivula neeVenkile zeApple kweli. Kwakhona, njengoko kubonisiwe Ixesha leIndiya, UTim Cook kunye nenkampani bazimisele ukuzisa i-India iPhones hlaziywa.
Inkampani yaseCupertino ngoku icela imvume kuRhulumente wase-India ukuba azise izixhobo ezazisakuba zezabanye abantu elizweni, into ayenzileyo ngokuhambisa isicelo esisemthethweni kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezendalo namahlathi. Kwabo bangayazi, igama Ihlaziyiwe, ikwabizwa ngokuba ihlaziyiwe okanye ibuyiselwe kwakhona, isetyenziselwa ukubiza izixhobo ezabuyiswa ngumsebenzisi ongaxolanga ngenxa yesiphoso kwaye inkampani ekuthethwa ngayo iphonononge yaze yalungisa kwaye emva koko yayibeka kwintengiso kwakhona ngexabiso eliphantsi kunokuba yayinjalo le intsha.
AmaIndiya aya kuba nakho ukuthenga ii-iPhones ezihlaziyiweyo
«Isicelo se-Apple esicela ukungenisa ii-iPhones ezingaphambi komnini wazo ezithengiswayo eIndiya kunye nokwenza ii-iPhones eziqinisekiswe ngumntu e-India efunyenwe liSebe lezeNdalo kunye namaHlathi.«, Umphathiswa Wezonxibelelwano uRavi Shankar Prasad.
Olu lwazi lutsha luza emva kokufunda ngenjongo ka-Apple yokwenza isabelo sentengiso esiphindwe kabini kwi-smartphone yakho e-India. Kwinyanga ephelileyo kuye kwaziwa ukuba inkampani ebaleka nguTim Cook isondele ekuvuleleni iiVenkile zayo ze-Apple elizweni, ke akusayi kubakho mfuneko yokuthengisa izixhobo zayo kwiivenkile ezigunyazisiweyo. Emva kweminyaka embalwa apho ukuthengiswa kwe-iPhone kuye kwanda ukubulela e-China, yonke into ibonakala ngathi ibonisa ukuba iApple ifuna ukwenza okufanayo, kodwa ngeli xesha kwilizwe laseIndiya.
Ngayiphi na imeko, yonke into ibonakala ibonisa ukuba ukuthengiswa kwe-iPhone kuya kwehla kulo nyaka okokuqala ukusukela oko iapile ye-apile yaqala ukuthengiswa ngo-2007. Kodwa, ngubani owaziyo, mhlawumbi ngo-2017 bazakugqitha ukuthengisa okuphunyezwe ngo-2015. Ngaba iya kuba sisiqalo sokuwa kwe-iPhone?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Intengiso ye-iPhones ehlaziyiweyo nayo iya kufika e-India
Ungayitshintsha njani i-DNS ukuphucula ukukhangela kwi-intanethi
Ukujongwa, ngoku siyafumaneka ukuze wenze ngokwezifiso amanqanaba e-Apple Watch